Gabar buug ay qortay ku bixisa nolosha qoyskeeda - BBC News Somali
Gabar buug ay qortay ku bixisa nolosha qoyskeeda
Image caption Rayaan waxay hore isugu dayday wadidda mooto bajaajka
Rayaan Abuukar Cali waxay BBC-da u sheegtay in rag fara badan ay buuggeeda iska indha tiraan, isla markaana uu iyada qudheeda damac ka galo, iskuna dayaan iney xod-xotaan, laakiin ujeeddadeeda ay sidaas ka weyn tahay.
Gabadhan oo ay da'deedu tahay 19 sano waxay ku dhalatay kuna barbaartay xerada Qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya, waxayna curad u tahay qoyskeeda.
haddaan familkeyga ka farxiyay,
fariid baan ahoo
facey waan u faanaa".
Erayadaas waa halkudhigga ay sida joogtada ah u isticmaasho Rayaan, oo nagu soo booqatay xafiiska BBC-da ee magaalada Nairobi.
Gabar Hargeysa ku soo bandhigtay buug u badan sawirrada goobaha taariikhiga ee Somaliland
Image caption "Halkii ay buugga iga gadan lahaayeen, aniga ayey i damcaan"
Magaalada Muqdisho ayey muddo 2 sano ah ku sugneyd iyadoo isku dayeysay iney hesho shaqo ay ku maareyso nolosheeda iyo tan qoyskeedaba.
Laakiin sida ay BBC-da u sheegtay, da'deeda oo aad u yar awgeed lama aamini karin wax shaqo ahna looma oggolaanin.
Ugu dambeyn waxay go'aan ku gaartay iney si iskeed ah u dadaasho, horumarkeedana ka shaqeyso.
Waxyaabaha ay diiradda saareysay ayaa ahaa shaqooyinka aysan dumarka sameynin ama ay dhif iyo naadirka ku yihiin.
Waxay ku guuleysatay in iyadoo aad u da' yar ay noqoto gabadhii ugu horreysay ee magaalada Muqdisho ka noqota darawalad kaxeysa Mooto Bajaaj, arrintaasoo kusoo jeedisay indhaha bulshada.
"Meelo badan marki aan tagay, xafiis walba ayaan garaacay anigoo shaqo raadinaya. Laakiin ma helin cid i aqbasha ama damiin iga noqota maadaama aanan dad ka aqoonin Muqdisho. Ka dib waxaan si rafaad badan ku bartay wadista mooto Bajaajta, waxaana noqday gabadhii ugu horreysay ee shaqadaas ka billowda Muqdisho".
Muddo yar ka dib Rayaan waxay baratay xirfadda Kalluumeysiga, si ay ugu shaqeysato, iyadoo sida ay noo sheegtay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo qaadata maqaalin, kalluumeysina aadda.
Waxay dib ugu soo noqotay Kenya
Isku dayo iyo dadaal fara badan ka dib, Rayaan waxay go'aansatay in ay isaga soo tagto Muqdisho, sababo la xiriira amni darro.
Waxaa u suurta gashay iney qorto buugeedii ugu horreeyay oo ku saabsan arrimaha bulshada, kaasoo ay rajo fiican ka leedahay inuu heer gaarsiiyo.
Image caption Rayaan waxay kaloo ka soo shaqaysay kalluumaysiga
"Shaqo xornimo leh oo aan aniga abuurtay ayaan billaabay, buug aan aniga qoray ayaan dadlka ka iibiyaa, waxaan ku wareejiyaa Makhaayadaha qiimihiisuna waa 500 oo shilin, oo u dhiganta 5 doolar", ayey tiri.
Waxay sheegtay iney caqabado badan kala kulanto bulshada, meelaha qaarna loo diido iney ku iibiso buuggeeda.
"Inta makhaayadood ee aan tagay tiro malaha laakiin waxaa la ii oggolaaday 2 makhaayadood oo kaliya. Sababta la iigu diiday waa iney dadku i dhahaan gabar ragga buug la dhex wareegeysa suurta gal ma aha".
Iyadoo ka hadleysa falcelinta ay mararka qaar kala kulanto dadweynaha ayey sheegtay iney dad badan u arkaan gabar akhlaaq daran oo mar walba ragga ku dhex jirta, balse iyadu ay ka go'an tahay ineysan dhag jalaq u siinnin oo ay horumarkeeda hiigsato.
Qaar ka mid ah ragga ay u ban dhigto buuggeeda ayey sheegtay iney mowduuc kale la aadaan ayna ka dalbadaan lambarkeeda taleefanka, si ay u shukaansadaan.
Laakiin kuwo kale oo dhinaca fiican ka eegana wey caawiyaan isla markaana waana ay dhiirri galiyaan.
"Maalin maalmaha ka mid ah anigoo buuggayga iibinaya ayaan la kulmay wiilal Soomaali ah oo shirkad ka aasaasay xaafad ku taalla nairobi, waxay igu dhaheen wax ma barataa? Waxaan u sheegay inaanan haysan dhaqaale aan wax barashada isaga bixiyo, ka dibna waxay iigu yabooheen iney kharashka waxbarashadeyda bixinayaan, sidaas ayaana hadda ku dhigtaa jaamacadda Nairobi".
Muxuu ka hadlayaa buugga?
Rayaan Abuukar Cali oo ka hadleysa waxa uu ku saabsan yahay buuggeeda ayaa tiri: "Buugga aan qoray magaciisa waxaa la yiraahdaa 'Ha geynin gurigaaga guul darro'. Waa buug dhiirri galin ah oo ka hadlaya waxyaabaha guusha lagu gaaro iyo guusha inysan ku xirneyn lacag".
Buuggan ayey sheegtay inuusan ahayn mid dad khaas ah loogu tala galay balse uu yahay buug ay u qortay iney ka faa'iideystaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed.